Solskjær oo ka hadlay haddii ay saameyn ku yeelaneyso qorshiisa suuqa xagaaga u soo bixitaankooda Champions League aysan – Gool FM
“Waxaan jeclaan lahaa inaan xirto maaliyada lamarka 7-aad ee Barcelona” – Antoine Griezmann
(Manchester) 17 Feb 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Man United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in haddii ay Red Devils ku guuldarreysato inay u soo baxdo tartanka UEFA Champions League aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin heshiisyada ay United-ka ku dooneyso ciyaartoy cajiib ah.
Manchester United ayaa haatan ku jirta kaalinta sagaalaad iyadoo leh 35 dhibcood, 41 dhibcood ayey ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Liverpool, iyadoo sidoo kale lix dhibcood ka danbeeysa kooxda kaalinta afaraad fadhida ee Chelsea.
Kooxda Manchester United ayaa waxay bar-tilmaameed ka dhiganeysaa dhowr heshiis suuqa xagaaga ee soo aadan, waxaana laga xusi karaa xiddigaha kala ah Jadon Sancho, James Maddison iyo Jack Grealish.
Haddaba tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta caawa ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Chelsea horyaalka Premier League wuxuu ku sheegay:
“Champions League wuxuu kooxda siiyaa wax badan oo ilahooda dhaqaalaha ku saabsan”.
“Waa wax aad u weyn inaan ku jirno tartan caan ah sida Champions League, laakiin shaqo fiican ayaan qabanaa, haddii aan si fiican u ciyaarno illaa dhamaadka xilli ciyaareedka, way fududaan doontaa inaan ku qancino bar-tilmaameedyadeena inay u ciyaaraan Manchester United”.
“Laakiin xilli ciyaareedkan waxaan ku jirnaa tartanka Europa League ee kama ciyaarno Champions League, balse haddii aan ku jirno ama haddii aan ka maqanahayba tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda, wax saameeyn ah kuma yeelan doonto heshiisyada aan dooneyno inaan sameyno, ha noqoto dhanka wanaaga ama dhanka xumaanta”.